Nhau - Mashandiro emagetsi eUV anoshanda sei
Mashandiro emagetsi eUV anoshanda sei
General deco mababu
Special deco mababu
Ul yakanyorwa Filament Mabumba
Vatyairi ve LED
Swag maindasitiri pendant lig ...
Ul ES zita 20, Musoro 24 an ...
Innovative Mumvuri retro vint ...
Usati wapindura uyu mubvunzo rega uone kuti chii UV UV.
Kutanga, ngationgororei pfungwa yeUV. UV, kana ultraviolet, kana kuti ultraviolet, inonzi electromagnetic wave ine wavelength iri pakati pe10nm ne400nm. UV yeakasiyana wave bhendi inogona kuganhurirwa muUVA, UVB uye UVC.
UVA: iyo wavelength yakareba, iri pakati pe320-400nm, inogona kupinda mukati megore negirazi mukamuri nemota, uye inogona kupinda mukati meganda reganda, ichikonzera kupisa kwezuva. UVA inogona kukamurwa kuva uva-2 (320-340nm) uye UVA-1 (340-400nm).
UVB: iyo wavelength iri pakati, pakati pe280-320nm. Ichasvitswa neozone layer, ichikonzera kupisa kwezuva uye kutsvuka kweganda, kuzvimba, kupisa uye kurwadziwa. Muzviitiko zvakakomba, blister kana peeling zvichaitika.
UVC: iyo wavelength iri pakati pe100-280nm, asi nekuti iyo wavelength pazasi pe200nm iri vharuvhu ultraviolet, inogona kutorwa nemhepo, saka iyo wavelength yeUVC iyo inogona kuyambuka mhepo iri pakati pe200-280nm, ipfupi uye ine njodzi wavelength iri, asi nekuti inogona kuvharidzirwa neozone layer, shoma shoma ndiyo inosvika pamusoro penyika bhora.
Mashandiro anoita UVC pakuberekesa
UV inogona kuparadza mamorekuru chimiro cheDNA (Bacilli) kana RNA (Virus) yezvinhu zvidiki, uye kuita mabhakitiriya kufa kana kutadza kubereka, kuzadzisa chinangwa chekuita mbichana.
Saka Mhinduro ndiHungu.
Lighting yeUVC inogona kuuraya Covid-19
Mercury UVC mwenje uye akatungamira UVC mwenje
Nhoroondo, mwenje wemekiyuri ndiyo yega sarudzo yeiyo UV mbereko. Zvisinei, Minamata Convention pamusoro pemekiyuri yakatanga kushanda kuChina kubva Nyamavhuvhu 16, 2017. Chibvumirano chinoda kuti kugadzirwa, kupinzwa nekutengeswa kwemekiyuri ine zvigadzirwa zvinotsanangurwa muConferensi zvinorambidzwa kubva munaNdira 1, 2021, uye mwenje wemekiyuri nyorwa pano. Naizvozvo, hapana nguva yakawanda yasara yemwenje yemekiyuri, uye UVC LED ndiyo yega nzira inovimbika.
Post nguva: Jan-05-2021